Waa in aad mid ka doorato jawaabahan su´aashan hoosteeda:
Waa in aad ugu yaraan hal khaanad ka gujiso su´aashan hoosteeda
Waa in aad mid ka doorato liiska is furaya ee su´aasha hoosteeda
Waa in aad ugu yaraan mid ka doorato khaanadda liiska ee su´aasha hoosteeda
Waa in aad warbixin ku qorto meesha qoraalka ee su´aasha hoosteeda
Warbixintu way kaydsantahy ba ! La xiriir warbixin qofka soo diray ee hoose
Nasiib xumo ma shaqaynayo xiriirkan aad isticmaashay!
Nasiib xumo cilmibaaristani ma aha Online hadda, kala xiriir soo diraha warbixin dheeraad ah
Lambarro keli ah ayaad ku qori kartaa meesha qoraalka ee su´aasha hoosteeda
Hore ayaad uga jawaabtay waydiimaha qoran.
Waa in aad u kala hormariso [x] layn!
Waa in aad sheegto E-mayl sax ah
Jawaab sax ah
Jawaab qalad ah
Waa in aad doorato ugu yaraan [x] doorasho!
Ma dooran kartid wax ka badan [x] doorasho!
Wakhtigaagi wuu dhacaye, guji xiriirka mar kale ama kontaktainfo@netigate.se, haddii aad qabto wax su´aalo ah
Jawaabaha waxa bixiyey
Tiradii ugu badnayd ee su´aalaha baaritaankan waa la gaaray
Wakhtigii loo xaddiday in lagu jawaabo waa la gaadhay
Waa in islaydhka laga saaro meeshiisii hore si baaritaanka loo samayn karo.
Waxad ku buuxin kartaa ugu yaraan [x] xaraf!
Waxad ku buuxin kartaa ugu badnaan [x] xaraf!
Waa in aad mid ka doorato oraah kasta
Waa in aad taariikhda u qorto qaabkan: SSSS-BB-MM
Wadarta guud waa in ay la mid noqoto [X]!
ARAGTIDA AAD MAAMULKA ADEEGGA
BULSHADA KA QABTO WAA SIDEE i TÖREBODA KOMMUN?
Sida aan sare ugu qaadno heerka tayada dhaqdhaqaaqeenna awgeed, ayaa waxaan doonayna in aan ogaanno, dhinacyada adeegenna ay ka wanaagsan yihiin iyo dhinacyada ay imminka ka xun yihiin. Sidaas awgeed, qof kasta oo xafiisyada adeegga bulshada booqan doono 20190901-20191030 la siin doona fursad uu su´aalaha hoos ku qoran kaga jawaaabo. Ka qaybgelida waa ikhtiyaari. Tan kale, qof magaciisa la sheegi doono ma jiro. Jawaabaha waa laysku dhex-shaandayn doona, taasoo marna suurtagelin doonin ogaanshaha sida qof gaar ah u su’aalaha ugu soo jawaabay.
Go’aanka ka jawabida su’aalaha adiga iskaleh, laakiinse helida aragtidaada waa arrin anaga aad muhim noogu ah. Tirada badan ee dadyoowga su’aalaha ka soo jawaaba, waxay sare u qaadi doonta faa’iidada xaalad-baaristaan laga heli doono.
Natijada xaalad-baarista waxaa laga heli doonaa www.kolada.se och www.toreboda.se Isla su’aalahaan waxaa ka soo jawaabay, dadyoow ku nool degmooyin kale. Taasoo suurtagelin doonto in jawaabaha laga helay degmooyinka kale lays barbardhigo.
Jeanette Vikström • Sharafka iyo ammaanka
ka ku xiga Next page Finish Start survey Start survey